Francisco Madeira oo Fadeexeeyay Warbaahinta Soomaalida. – Shabakadda Amiirnuur
November 8, 2017 6:18 am by admin Views: 136
Francisco Madeira oo ah Wakiilka Ururka Midowga Afrika ee oo shir jaraa’id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in ay ciidamadoodu billaabayaan iney isaga baxaan Soomaaliya isagoo sheegay in dabayaaqada sannadkan iyo bilowga sannadka soo socda ay dalalkooda u diri doonaan kumannaan askari.
Qorshahan ayaa sida uu sheegay qeyb ka ah qaraarkii kasoo baxay Qaramada midoobay ee Tirsigiisu ahaa 2372 kaasi oo amarayay in dhammaadka sannadka 2017 ciidamada AMISOM bilaabaan bixitaan qabyeysan.
Wuxuu sheegay in ciidamadoodu ay Soomaaliya uga baxayaan si qeyb qeyb ah, qeybta kowaadna ay bixi doonto bisha soo socota taasoo uu tiradeeda ku sheegay 15.00 (kun iyo shan boqol)
Madeira ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar ay maalmihii lasoo dhaafay buunbuuninayeen inta badan warbaahinta Soomaalida, wararkaas oo sheegayay in ciidamo badan oo Itoobiyaan ah ay soo galeen Soomaaliya.
Ciidamada shisheeye ayaa Soomaaliya jooga muddo 10 sano ah waxaana dhowr jeer dowladaha reer galbeedka ay ku eedeeyeen iney ku fashilmeen shaqadii loo keenay oo ahayd iney cirib tiraan Al-Shabaab dalkana gacanta ku dhigaan.
Tallaabadan ay ku baxayaan ayaa ka dhigan in madaxweyne Farmaajo uu noqday madaxweynaha ugu nasiibka daran, waayo waxa uu kusoo aaday xilli ay ciidamada Amisom tabar darreeyeen, dalka isaga baxayaan iyo Al-Shabaab oo sii xoogeystay, waana midda keentay in uu shirkii maamul goboleedyada ka sheego iney ka adkaan waayeen Al-Shabaab.